Indlela yokwahlula amakhowe ezidyowayo kwi-poisonous
Iipropati zokuphulukisa zefungi ziyaziwa kwiXVII yekhulu le-XVII, nangona e-China imbali yophando lwabo ingaphezulu kweminyaka engama-2000. Abahlali behlathi basebenziselwa ukunyangwa kwemivimbo, i-frostbite, izifo zesisu, isifo sekholera, izifo zesikhumba, i-tonsillitis, i-asthma, isifo sofuba, isifo sofuba, utywala kunye nomhlaza.
Izazinzulu zanamhlanje ziqinisekisa ukuba iziqulatho ezivela kwiifungi ezahlukeneyo zinomlinganiselo ogqithisileyo wempembelelo. I-bactericidal, i-antitumor, i-choleretic ithetha-konke oko. U-oily oyile, umzekelo, uncedo ngeentloko ezinzima kunye ne-gout, kwaye ezinye zeefungi zize zenze i-antibiotics enqabileyo inqanawa kaKoch. I-Chanterelles, ngokungafani namanye ama-mushroom, musa ukuqokelela izinto ezifakwe kwi-radioactive, kodwa ngokuchaseneyo - zinceda ukuzisusa emzimbeni. Amakhowe asekwindla angasetyenziselwa njenge-laxative, kunye nobusika - njenge-antiviral. Lawa ma-mushroom akwazi ukulwa kuphela noStaplanlococcus aureus kunye no-Escherichia coli, kodwa nokuphilisa i-thyroid gland. Kodwa makhe sibone indlela yokwahlula amakhowe atywayo avela kwityhefu.
Kubalulekile! Abantu abane-gastritis engapheliyo, izifo zesibindi kunye neengtso zichazwe. Ukongezelela, ukuphathwa kakubi kwalo mveliso kunokubangela ukuba i-botulism ebulalayo, echaphazela inkqubo ye-nervous central.
Amakhowe - into ekhethekileyo yeso sondlo, apho iintsuku zexesha elidala zihlala zithatha inyama endaweni yetafile yezilwanyana.
Ziqukethe i-fiber eninzi, i-carbohydrates, i-enzymes ephula amafutha, ama-amino acids amaninzi kunye namafutha abalulekileyo, malunga neeprotheni ezingama-30 (oku ngaphezu kokutya). I-Lecithin, equlethwe kuyo, inqanda ukutshala kwe "cholesterol" embi. Ukucebisa umzimba kunye ne-polysaccharides ne-sulfuri kwenza kube lula ukubiza ama-mushrooms ukuba i-agent antiticancer. Ngokomxholo wevithamini ze-B, amakhowa athabatha izityalo zokutya, kwaye zikhona iivithamini ezininzi, i-D ne-PP kuzo kuzo zonke izityalo kunye neziqhamo. Nangona kunjalo, kukufanelekile ukukhumbula ukuba le mveliso kunzima ukugaya. Ngama-gramu ayi-100 omhlophe omisiwe - i-22k kcal (kwilwanyana ephekiweyo-105), umlinganiselo ofanayo we-rozhikov u-183 kcal, kunye nama-mushroom - 200. Kodwa kwi-100 g yamakhowe amasha kuphela ngama-20-30 kcal.
I-membrane yeseli yamakhowe iquka i-cellulose engahlaziyiyo, kwaye ngoko ke izipho ezomileyo okanye eziqingqiweyo zehlathi aziyi kuzisa inzuzo emzimbeni, idlula kwinqanaba lomzimba njengemveliso ye-ballast. Ukuze bafumane inzuzo eninzi kuma-mushroom, bacetyiswa ukuba basetyenziswe njengobumba be-mushroom ukuze bahlambuluke, bahlambe, bome kwaye badle. Gcina le powder ngeenyanga ezili-12 kwijelo evaliwe ngokukhawuleza, faka izitya ezitshiweyo ezenziwe ngokutsha okanye imizuzu engama-1-2 ngaphambi kokupheka. Kodwa, nangona zonke izixhobo ezincedo zamakhowe, iingcali zincoma ukuba zingabandakanyi kwimenyu yabantwana.
ESwitzerland, ezizityebi kumakhowa amhlophe (amakhowe), ziqwalaselwa, zichanekile, zingenakwenzeka. Emazweni aseMpuma Yurophu, lawa awona "asemthethweni" abameli beentsapho zamakhowe, zibhekwa phakathi kwezona zinto zilungele ukulungiswa kwazo kunye nezondlo. Zinyanyisiwe, zibilisiwe kwaye zikhethiweyo. E-Italy, lungiselela iintlobo ezahlukeneyo zealadi ngamakhowe amhlophe amhlophe, enexesha elimnandi kunye neparmesan. Iphunga elikhethekileyo le-boletus elomileyo linika i-sophistication kwi-sauces kunye nokugqoka ilayisi kunye nezitya zenyama. Ukongeza kwixabiso laso elingenakunyaniseki, le fungus idume ngokukwazi kwayo ukukhuthaza ukugaya.
I-Chanterelles yazo zonke i-mushroom zibuqili
Ngenxa yokungabikho kweempethu, abahlali behlathi baqatshelwa njenge-kosher (avunyelwe ukuba badle ngokwemiqathango yamaYuda). Ziqulethe ii-amino acid eziyimfuneko, iivithamini A, B, kunye nePP, ithusi kunye ne-zinc. Kukholelwa ukuba ukutya ama-chanterelles kunceda ukuphucula amehlo, kuthintela ukuvuvukala kwamehlo, kunciphisa ukoma kweembrane kunye nekhumba, kwandisa ukunganyangeki kwizifo ezithathelwanayo. Kwiimveliso zonyango ezinye iziyobisi zisebenzisa i-chitinilonase-into ekhutshwe kwi-chanterelles. Lawa ma-mushroom ayenzi naziphi na iifom.
Kwabizwa ngokuba yi-pancake ...
E-Rashiya, i-mushroom yangempela ibhekwa njengenye yamakhowe amahle kakhulu - ityuwa ngokwahlukileyo okanye kunye namanye ama-mushroom (i-redheads, freckles) kwimibhobho. Kwimihla endala yayihlonishwa njengowomakhowa kuphela ofanelekileyo wokukhetha, kwaye wabizwa ngokuthi "ukumkani wama-mushroom" - ngenxa yobume bakhe obukhethekileyo kunye nephunga elimnandi. Ngethuba lokuzila ukutya, iintlobo ezahlukeneyo zokutya ezivela kumakhowa zaziyi-decoration ephezulu yeetafile.
Ubomvu, obomvu, ukholifula
Ama-mushroom alubomvu anamayeza, aqulethe izinto ezinciphisa i-oxidation ye-fat, kunye ne-antibiotic lactariovolin, ene-bacteriostatic effect (ekwazi ukuvimbela okanye ukunciphisa ukukhula nokuphuhliswa kweebhaktheriya).
Ngenxa yezimpawu zabo ezicebileyo, aba bazalwana behlathi abaphantsi kwefungi. Ubunwele obomvu kwi-ukhilimu omuncu ubugcisa obuphambili bokutya. Nangona loo ma-mushroom ayenakunamanzi, kwaye, engcono kunazo zonke - ngendlela eyomileyo, xa engazange ahlanjwe, kodwa nje ahlambulule i-debris kwaye afafazwe ngetyuwa aze abekwe kwiingqimba.
Kwingamashumi amabini kwakhona
EmaNtshonalanga, kuthathwa njengengenakulinganiswa, kwixesha elidlulileyo libhekwa njengento efanelekileyo yokutya-ngokunyanga okwaneleyo unyango, i-honey agarics inokubangela ukugulisa ukutya. Abemi baqulethe i-micronutrients - kuphela i-gram 100 yefungi izakuzalisa imfuno yansuku zonke yomzimba kwi-zinc nobhedu, ezibandakanyeka kwinkqubo ye-hematopoiesis. I-marmalade edibeneyo ephekiweyo, edikiweyo, enetyuwa kunye neyolwandle.
Enye yeendawo "ezihlambulukileyo" ezihlala emahlathini, namhlanje ezikhulayo emhlabeni wonke kwizinga lemveliso. Amakhowa asekhaya - ukutya okufanelekileyo kokunciphisa - i-fibre, iiVithamini D, E, PP kunye neqela B, i-potassium, isinyithi, i-phosphorus, i-taste enhle kwaye ngexesha elifanayo i-kcal ye-15 kcal nge-100 g.
Omnye umakhowa otshalwayo. Abalandeli bakhe bathi ukubunjwa kwe-vitamin-mineral yamakho mushroom akufanelanga. Cinga nje: i-cobalt, i-magnesium, isinyithi, ubuninzi be-phosphorus, ubuninzi bevithamini, i-biotin kunye nezinto ezininzi eziphilayo. Ezi makhowa ziyimveliso yokutya, azinayo i-mustard namafutha kunye nezinye izinto ezinomsindo, kunye ne-chitin enzima yokugaya, ngoko banokuphikiswa ngokucacileyo.
Iipropati eziwusizo zeipinapples
Kungcono kakhulu ukuhlamba i-linoleum
Kutheni amantombazana alahlekelwa ngumdla kumadoda?
ULarisa Guzeeva wayesaba abantu abanomdla nge sipho sakhe somlingo
Iimodeli zokuziphatha kobudlelwane bezoshishino
Casserole kwi sipinashi kunye noshizi